‘इन्स्टेन्ट नुडल्स’ जस्तो भइरहेछ अचेलकाे दसैं — samadhannews.com
पाेखरा, २९ आश्विन:
दसैं भन्ने बित्तिकै नेपालीको चाडका रुपमा बुझिन्छ । त्यसमा पनि अझ हिन्दू नेपालीको हो । संसारमा अन्य ठाउँपनि छन् हिन्दूहरु । तर यसरी हर्षोल्लासपूर्ण ढंगले मनाइँदैन ।
इन्डियामै हेरौं । छिमेकी देश भएर पनि हाम्रोजस्तो टिका लगाएर, आर्शीवाद मागेर मनाइँदैन । त्यसरी नै चाहे बंगलादेश होस्, चाहे भुटानतिर बसेका हिन्दू होलान् कसैले पनि हाम्रोजसरी मनाउँदैन । हिन्दू जहाँका भएपनि दसैं भनेर मानेको देखिँदैन । यसर्थमा पनि हामी हाम्रो नेपाली मौलिकतामा गर्व गर्नुपर्छ ।
दसैं र विजयादशमीमा पनि फरक छ । पहिले त हामी दसैैं मान्थ्यौं । पछिपछि आएर दसैंलाई विजयादशमी भन्न थालियो । पहिलो त दसैं नेपालीहरुको चाड हो । यसमा नितान्त नेपाली मौलिकता मिसिएको छ । दोस्रो कुरो पछि आएर जनजातिले मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा आयो । यो भनेको चाडलाई परिभाषित गर्ने कुरा हो ।
अहिले वैज्ञानिकहरुले भन्न थाले ‘जमराको रस मान्छेका निम्ति अत्यन्तै उपयोगी छ ।’ संसारका अन्य जुनसुकै धर्मका कर्मकाण्डहरुमा त्यति वनस्पतिको प्रयोग हुँदैन, जति हिन्दुहरुको हुन्छ । दसैं पनि वनस्पतिहरुसँगै जोडिएको छ ।
हिन्दू भएकैले हामी, तुलसीको पूजा गर्छौं, बेलको पूजा गर्छौंं, रुद्राक्षको पूजा गर्छाै, पहिरिन्छौं । यी सबैका पछि विज्ञान छ । स्वास्थ्य विज्ञानसँग यसको नजिकको सम्बन्ध छ । दसैंमा जमरा लगाउनुका पछि पनि कतै न कतै स्वास्थ्य विज्ञान जोडिएको छ । नवरात्रका ९ वटा देवीहरु छन् । शैलपुत्रीदेखि सिद्धिदात्रीसम्मका । प्रत्येकदेवीसँग एउटाएउटा वनस्पति जोडिएकै छ ।
हामी बलि दिन्छौं । बलि दिनु उचित हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि पछिल्लो समय विवाद बढेर आएको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले बलि प्रथा अत्यन्तै कम भएको छ । तर मासु खाने चलन बढेको छ । हिजो दसैंतिहारजस्ता चाडपर्व आएपछिमात्रै मासु खाने भन्ने थियो । आज ३ छाक मासु खाने भइसक्यो मान्छे । मांसहार बढको छ तर बलि प्रथा घटेको छ ।
हिजो बलि दिँदा मांसहार कम थियो । यसको तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति पनि हाम्रो अघि छ । अहिले हामीले दसैैं मानिरहँदा असत्यविरुद्ध सत्यका जितको एउटा परिकल्पना गरेका छौं । अन्यायविरुद्ध न्यायको परिकल्पना गरेका छौं । कथामा के छ भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण होइन । त्यो कथाले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ त्यो पो हो महत्वपूर्ण कुरा ।
त्यो दृष्टिकोणले दशैंको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्ना अग्रजप्रतिको सम्मानभाव र अनुजप्रति आशिर्वाद हो । एकप्रकारले दसैं अग्रजबाट अनुजले आशीर्वाद थाप्ने पर्वका रुपमा पनि चिचिन्छ । यसरी हेर्दा अग्रजअनुजको सम्बन्धलाई गाढा बनाउन कुन धर्मले छेक्छ ? कुन सम्प्रदाय, कुन रंग र कुन सिद्दान्तले अग्रजबाट अनुजले आशीर्वाद थाप्नु हुँदैन भन्छ ?
जहाँसम्म छ, जनजातिहरुले सेतो टिका लगाउँछन् । कतिपय जनजाति कुलको पूजा गर्छन्, हतियारको पूजा गर्छन् । जनजातिमा गुरुङ, मगरले चाडपर्वमा पनि हतियारको पूजा गर्छन् । कोटमा बलिदिने, आफ्नो हतियारलाई सधैं सफा राख्ने, हतियारमा शक्ति देख्ने हामी जनजातिहरुको पहिल्यैदेखिको चलन हो । कति जनजाति त अहिलेपनि नवरात्रीका नवैं रातमा साधना गर्नेहरु पनि छन् ।
विभिन्न हिन्दू मन्दिरहरुमा अहिलेपनि जनजाति समूदायकै पूजारी रहने प्रचलन छ । काठमाडौं उपत्यकामा नेवारहरु होलान् । मध्यपहाडमा मगर होलान् । त्यो दृष्टिकोणले धर्मका नाममा अहिले पनि कतै थिचोमिचो छ भने त्यसलाई परिमार्जित गरेर अग्रजबाट अनुजले आशीर्वाद लिने राष्ट्रिय पर्वका रुपमा अघि लैजानुपर्छ ।
पहिले र अहिलेको दसैंमा धेरै फरक आइसक्यो । पहिले दसैं साँच्चिकै दसैं हुन्थ्यो । अहिले त तयारी चाउचाउजस्तो भइसक्यो । अब दसैं घरघरमा पूर्वतयारी गर्ने पर्वका रुपमा भन्दा कृत्रिमतातर्फ गयो । एकछिन बजार गयो, मिठाइ, उपहार के चाहिन्छ किनेर ल्यायो दसैं मनायो ।
समयक्रम बद्लिँदा दसैं पनि फेरिँदै आएको छ ।
पहिले दसैं आउनासाथ गाउँघरमा पिङ बन्थे । टोलटोलमा रोटेपिङ, चर्खे पिङ ठडिन्थ्यो । त्यो बेला दसैंको उत्साह नै छुट्टै हुन्थ्यो । दसैं केटाकेटीको अनुहारले बोकेर ल्याउँथ्यो । दसैंमा चाहिन्छ भनेरै घरैपिच्छे बोका पाल्ने गरिन्थ्यो । मठमन्दिरमा देवीहरुको दर्शन गर्न जाने एउटा पद्धति नै थियो । अहिले त्यो पूर्ण रुपमा हराइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ ।
प्रत्येक घरहरुका बीचमा खुल्ला जग्गा हुन्थ्यो । ती खाली जग्गामा गएर चंगा उडाइन्थ्यो । चंगा लडाउने क्या गजबको खेल खेलिन्थ्यो । पछिपछि पोखरामा आवादी बढ्दै गयो । जग्गा साँघुरिँदै गयो । पछिपछि आउँदा दसैंमा चंगा उडाउने चलन पनि पातलिँदै गयो ।
पहिले त सबैको घरघरमा बत्ति बाल्ने चलन थियो । मलाई लाग्छ दसैंको कोजाग्रत पूर्णिमादेखि नै तिहारसम्म बत्ति बालिन्थ्यो । मान्छेहरु रातो माटो, कमेरो माटो लिएर घर लिप्थे । रोटी पोल्न व्यवस्तता देखिन्थ्यो । प्रत्येकका घरघरमा ढिँकी हुन्थ्यो । जाँतो हुन्थ्यो । ती जाँतोमा विशेषगरी महिलाहरु रोटी बनाउन चामल पिनिराखेको, कुटिराखेको अवस्था हामीले देख्थ्यौं ।
पोखरामा पहिले चिउरा कुट्नेहरुको लश्करै हुन्थ्यो । यो बागबजार एरियामा पनि घरपिच्छे चिउरा कुट्न जाने चलन हुन्थ्यो । चिउरा कुट्नेहरु ढिँकीमो ढ्वाङढ्वाङ आवाज आउँथ्यो । विशेषगरी ‘दमाई’ हरुले लुगा सिलाउन हतार भएर रातभर कल चलाइराखेको आवाज आउँथ्यो । रातको समयमापनि ती बज्ने फरकफरक आवाजले दशैं आएको अनुभूति दिन्थ्यो । दिनमा आकाशमा चंगा उडेको हुन्थ्यो । मान्छेहरु दशैंलाई उत्सव बनाउन छुट्टै किसिमको तयारी हुन्थ्यो ।
यो भौतिक विकाससँगै दसैं उत्सवको तयारी गर्ने परम्परा पनि बिस्तारै घट्दैघट्दै गएको छ । अहिले दसैंको रौनकता हट्दै गएको छ, पोखरामा । त्योबेला केटाकेटी कस्को घर गएर कति पैसा थापियो भनेर एक ठाउँमा जम्मा भएर गन्न बस्थे । वर्षको १-२ चोटीमात्रै लुगा फेर्न हुन्थ्यो । केटाकेटीहरु बाउआमालाई के नयाँ लुगा किनिदिने भनेर सोध्थे । अभिभावक छोराछोरीको रहर पूरा गरिदिन हतारमा हुन्थे ।
अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन । अहिले के छ भन्दा दिनको ३ प्रहर मासु खाएका छन्, जहिल्यै बजारमा रेडिमेड रोटी खाएका छन् । अहिलेको पुस्तालाई नयाँनौलो भन्ने थाहा छैन । अहिले सिमितता केमा आयोभन्दा धेरै समयसम्म टाढा बसेका दाजुभाइ, आफन्त, इस्टमित्र घर फर्कने भन्नेमात्रै भयो । अहिले दसैं फेरिएर लामो समय छुट्टिएर रहेकाहरु पुनर्मिलन हुने पर्वका रुपमा मात्रै परिभाषित हुन पुगेको छ ।
अहिले पोखरामा पनि संस्थागत रुपमा नै दसैं मान्न थालिएको छ । अग्रजहरुलाई बोलाएर सामूहिक टिका थाप्ने चलनको विकास भएको छ । दसैंमा नयाँ बन्दै गएको छ । मैले पनि त्यो ‘परिवर्तित’ दसैंको अभ्यास गर्न थालेको छु । अरुबेला दौरासुरुवाल लगाऊँ कि नलाऊँ तर दसैंमा लगाएकै हुन्छु ।
अहिले पोखरामा हेर्ने हो भने दसैंमा टिका थाप्न हिँडेकाहरु प्रायले दौरासुरुवाल लगाएकै हुन्छन् । यसरी हेर्दा दसै दौरासुरुवालको पुनर्जागरणको कालपनि हुन थालेको छ । दौरासुरुवाल राष्ट्रिय पोसाक मानिनु हुँदैन भनेर आक्रमण भएपछि दशैंले त्यसको संरक्षण गर्न थालेको छ ।
पहिले घरमा एउटा बोका, च्यांग्रा ल्याउँदा जुन रौनक हुन्थ्यो । घरपरिवार एक भएर काटकुट पारेर खाइन्थ्यो । सिंगो नसक्ने छ भने छिमेकी वा भाइभाइ मिलेर बाँडिन्थ्यो । त्यो एउटा राम्रो सिस्टमको अभ्यास पनि थियो । तर त्यही सिस्टमबाट हामी बिस्तारैबिस्तारै तयारी चाउचाउ खाएजस्तो गरेर दसैं मनाउने क्रममा गएका छौं ।
(कवि तथा संस्कृतिविद् श्रेष्ठसँग समाधान संवाददाता विकास रोकामगरले गरेकोे कुराकानीमा आधारित)